မြန်မာနိုင်ငံသားများက (ရာဇ၀တ်မှု) ပြစ်မှုအများဆုံးကျူးလွန်” မီဇိုရမ် ၀န်ကြီးချုပ်” |
« ချင်းကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ညီလာခံအောင်မြင်စွာ ကျင်းပ
ချင်းအမျိူးသားပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုပြီ »
မြန်မာနိုင်ငံသားများက (ရာဇ၀တ်မှု) ပြစ်မှုအများဆုံးကျူးလွန်” မီဇိုရမ် ၀န်ကြီးချုပ်”
၀၅ မေလ ၂၀၁၀၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ.မြောက်ဘက် မီဇိုရမ်ပြည်နယ်သို့ဝင်ရောက်လာ ကြသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ သည် မကောင်းမှုဒုစရိုက် ပြစ်မှုအများဆုံး ကျူးလွန်သူများဖြစ် သည် ဟု မီဇိုရမ်ပြည်နယ် လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် က ပြောဆိုလိုက်သည်။မေလ ၃ ရက်နေ့က မြို့တော် အိုင်ဇောလ်ရှိ ဗန်နပါးခန်းမဆောင်တွင် ပြုလုပ်သည့် အဆင့်တစ် အစိုးရ ၀န်ထမ်း အရာရှိ များ အစည်းအဝေးတွင် မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ပူး လာလ်ထန် ဟောလ် က ယခုကဲ့သို့ ပြောဆို လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မီဇိုရမ်ပြည်နယ်အတွင်းလက်ရှိကြုံတွေ.နေရသည့် မကောင်းမှုဒုစရိုက်အများစု ဟာ နိုင်ငံခြား သားတွေ ကျူးလွန်ကြတာဖြစ် ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ရောက်ရှိလာကြ သူများက မကောင်း မှုဒုစရိုက်မျိူးစုံနဲ. ကျနော်တို.ကို လွှမ်းမိုးအုပ်စိုး နေဆဲဖြစ် တယ်ဟု ၀န်ကြီးချူပ်ကပြောဆို လိုက်ကြောင်း ယနေ.ထုတ် ဗန်လိုင်းနီးနေ့ စဉ် သတင်းစာ တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
ထို့ နောက် မီဇိုရမ်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ပူး အာရ် လာလ်ဇီးလျန်နာ ကလည်း မီဇိုရမ်ပြည်နယ် အတွင်း ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ မြန်မာနိုင်ငံ သားများကိုဖမ်းဆီးရမိပါက မီဇိုရမ် ထောင်ထဲတွင် မထားတော့ဘဲ မြန်မာစစ်အစိုးရလက်ထဲသို. တိုက်ရိုက်အပ်နှံ တော့မည် ဟု ပြီးခဲ့ သည့်နှစ်ကပြောဆိုခဲ့ခြင်းအပေါ် တကယ့်လက်တွေ.အခြေအနေတွင် အကောင်အထည် မဖေါ်နိုင်ခဲ့ ကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာမှပြဌာန်းသည့် ဥပဒေပြဌာန်းချက်များရှိနေသောကြောင့် ယခင်နှစ်က ပြောကြားသွားသည့် အတိုင်းအကောင် အထည်မဖေါ်နိုင်သည့်အပေါ် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိကြောင်းပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက ပြောဆိုသွားခဲ့ကြောင့် သတင်းစာတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။သူကဆက်လက်ပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှု၊ စစ်အစိုးရမှ လူထု အပေါ် နည်းမျိူးစုံဖြင့်ဖိနှိပ်ချူပ်ချယ်မှုကြောင့် မီဇိုရမ်ပြည် နယ်သို.၀င်ရောက် လာသူ များကို မီဇိုရမ်အစိုးရနှင့် အစိုးရမဟုတ်သည့်အဖွဲ.အစည်းအသီးသီးက ခရုဏာ ထားရှိကာ ခိုလှုံခွင့် ပေးထားသော်လည်း ယင်းကဲ့သို.ကြိုဆိုမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားများက ဒုစရိုက်မျိူးစုံ ကိုကျူးလွန်နေ သည့်အပြင် မီဇိုရမ်ပြည်သူများကို သေနပ်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ မီဇိုးအမျိူးသမီးများကို မုဒိန်းကျင့်ခြင်း၊ အရက်ချက်ခြင်းများ ကိုလုပ်ဆောင်နေကြသည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထို့ ကြောင့် ဤရာဇ၀တ်မှုများ နှိမ်နှင်းရေးအတွက် အစိုးရ၀န်ထမ်းများမှာလည်း တာဝန်အပြည့်အ၀ ရှိကြောင်းနှင့် ရာဇ၀တ် မှု နှိမ်နှင်းရာတွင် ရဲဌာနတခုလုံး အခက်အခဲ တွေ့ နေကြကြောင်း ပြော ကြားသည်ဟုသိရသည်။
မီဇိုရမ်ပြည်နယ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ လာရောက်နေထိုင်သူ တစ်သိန်းခွဲခန့် ရှိမည်ဟုခန့် မှန်း ထား ကြပြီး ယင်းအနက် ချင်းလူမျိုးများသည် တစ်သိန်းခန့် ရှိနိုင်ကြောင်း ခန့် မှန်းထားကြသည်။
မီဇိုရမ်ပြည်နယ်အတွင်း အကြီးမားဆုံးသော အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်သည့် မီဇိုးလူငယ် အသင်း (၀ိုင်အဲမ်အေ) ကလည်း ဒေသအတွင်း လာရောက် ခိုလှုံကြ သည့်မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ စာရင်းအတိအကျ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ၂၀၀၉ ခု နှစ်စ၍ မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ သန်းခေါင်စာရင်းကို ကောက်ခံခဲ့ပြီး ယခုအထိ ၄င်းတို့ စာရင်းကို တရားဝင် ထုတ်ဖေါ် ကြေညာခြင်းမရှိသေးပေ။